Huawei Watch GT 2: Famakafakana ny smartwatch Huawei vaovao | Vaovao momba ny gadget
Fanadihadiana Huawei Watch GT 2: Ny smartwatch misy fizakantena bebe kokoa
Eder Esteban | | hevitra, SmartWatch
Roa herinandro lasa izay ny Huawei Mate 30 amin'ny fomba ofisialy. Amin'ity hetsika fampisehoana ity, ny marika sinoa dia namela antsika zava-baovao hafa, toy ny fampisehoana ny famantaranandro vaovao. Momba ny Huawei Watch GT 2 io, izay natomboka taorian'ny fahombiazan'ny taranaka voalohany, izay efa nihoatra ny 10 tapitrisa ny varotra manerantany.
Izahay dia efa afaka nisedra ity famantaranandro vaovao ity tamin'ny marika sinoa, nandritra izay andro rehetra izay. Afaka nandinika sy namakafaka azy izahay. Tamin'ny famelabelarana azy, ity Huawei Watch GT 2 ity dia nambara ho famantaranandro marobe, miaraka amin'ny fahaleovan-tena goavana ary afaka mampiasa azy io isika rehefa manao fanatanjahan-tena sy amin'ny andavan'andro koa.
Voalohany indrindra dia mamela anao amin'ny zava-nisongadina tamin'ity famantaranandro ity ny marika sinoa. Mba hahafahanao manana hevitra mazava momba ny inona navelan'ity Huawei Watch GT 2 antsika ity amin'ny sehatra teknika. Famantaranandro mitazona endrika mitovy amin'ny an'ny teo aloha, na dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana aza izy io.
Ny maodely izay nohalalininay amin'ity tranga ity no lehibe indrindra, ny savaivony 46 mm.
Ny Huawei Watch GT 2 dia aseho ho famantaranandro miovaova. Ity dia zavatra mazava amin'ny famolavolana azy, misy satro-boninahitra roa, izay mampitovy azy kokoa amin'ny famolavolana famantaranandro ara-dalàna, izay mamela ny fampiasana azy io tena mampahazo aina, na rehefa manao fanatanjahan-tena na afaka mitafy azy. Miasa . Ho fanampin'izany, ny famantaranandro dia mamela antsika hampiasa fehin-kibo azo ovaina, izay mahatonga azy io ho maro kokoa. Tsotra ny fomba fanovana ny tadiny, satria ao amin'izy rehetra ireo dia mahita mekanisma ahafahantsika mamoaka azy ireo isika ary mametraka vaovao. Io no mekanisma hitantsika amin'ny smartwatches hafa, ankoatry ny marika famantaranandro mahazatra.
Ity modely ity amin'ny endriny mahazatra, izay no nosedraina, miaraka amina fehikibo hoditra volontany (Pebble Brown) ary kiraro fanatanjahan-tena vita amin'ny fingotra mainty. Ny brasele volontsôkôlà dia tena kanto, kilasika ary tena ahazoana aina ihany koa. Izay mahafaly ny manao an'ity Huawei Watch GT 2 ity amin'ny fehin-tànana amin'ny fotoana rehetra.
Ny fehikibo vita amin'ny fingotra dia natao ampiasaina rehefa manao fanatanjahan-tena. Izy io dia fomba fanatanjahan-tena kokoa, ankoatry ny fitaovana maharitra manohitra kokoa. Noho io antony io, indrindra raha ampiasaina rehefa milomano (mamela ity safidy ity ny famantaranandro) dia mora kokoa ny mampiasa ny tadin'ny fingotra, izay mahazaka tsara kokoa noho io karazana toe-javatra io. Mahazo aina kokoa ihany koa izy raha misy hatsembohana na raha avy ny orana ka lena, izay mamela ny fampiasana an'io famantaranandro io amin'ny fotoana rehetra.
Manana fehy maromaro afaka mampiasa an'ity Huawei Watch GT 2 ity isika amin'ny toe-javatra isan-karazany. Ka mahavita zavatra tsara amin'ny resaka fahaizan-javatra. Ankoatr'izay, ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina amin'ny famantaranandro mihitsy sy amin'ny tadiny dia nanjary mazava kokoa, noho izany dia asa tsara no nataon'ity mpanamboatra sinoa ity.
Iray amin'ireo lafin-javatra izay nahagaga ahy indrindra, ho an'ny tsara kokoa, amin'ity smartwatch ity maivana be izany. Miaraka amin'ny tady iray dia manodidina ny 60 na 70 grama ny lanjany, miankina amin'ny tady. Noho io antony io dia maivana be ny fampiasana azy, misy fotoana aza adinoo fa manao ny famantaranandronao ianao, izay tena ilaina amin'ity tranga ity, satria midika izany fa manana fahalalahana miavaka ianao amin'ity hetsika ity. Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny fanaovana spaoro na isan'andro.
Na dia alohan'ny hatory aza dia afaka mampiasa ny famantaranandro isika tsy misy mahazo aina azy io. Na dia miankina amin'ny safidin'ny tsirairay aza izany dia zatra matory tsy misy famantaranandro aho, ka toa hafahafa ny mandeha matory miaraka amin'ity Huawei Watch GT 2 ity, fa raha manana ny famantaranandro ianao rehefa matory dia ianao tsy tokony hanana olana be loatra amin'io lafiny io. Ho fanampin'izay, tsy hisy zavatra hitranga ao aminy mandritra ny torimasoo, amin'ny resaka vongan-doha na rangotra, noho izany dia manamora ny fampiasana ny famantaranandro amin'ny fotoana hatoriana.
Ny fehikibo dia ahitsy amin'ny haben'ny tananao amin'ny fotoana rehetra, azontsika atao ny manamboatra azy ireo, mba hampiasainay amin'ny fomba tsara kokoa ny famantaranandro. Amin'ity lafiny ity, ny zava-dehibe dia ny misafidy ny haben'ny dial. Manana hato-tanana somary manify aho, noho izany dia somary lehibe ny maodely 46 mm amin'ity tranga ity, na dia tsy nanana olana tamin'ny fampiasana aza aho, fa tsara ny manamarina hoe iza amin'ireo haben'izy roa ireo no mifanaraka kokoa amin'ny Huawei Watch GT 2 anao ity. hato-tanana. Na dia somary lehibe kokoa aza ny dial iray dia mampiadana ny fampiasana ny famantaranandro, indrindra rehefa mila mampiasa ny efijery mikasika azy ianao.
Samsung Galaxy Watch Active, manadihady ny rindrambaiko finday mora vidy an'ny Samsung izahay
Mba hampifanarahana ny famantaranandro amin'ny finday avo lenta, tsy maintsy mampiasa Bluetooth amin'ny fitaovana roa isika, izay hahafahan'izy ireo mifandray voalohany, raha toa ka mila misintona fampiharana amin'ny telefaona koa isika, inona ny fampiharana Huawei Health. Avy amin'ity rindrambaiko ity dia hanana fidirana amin'ny asa sy angona maro izahay izay voangona amin'ny famantaranandro, toy ny halavirana, ny zotra na ny angona momba ny torimaso sy ny adin-tsaina.
Noho izany, raha vantany vao vita ny fifandraisana amin'ny Bluetooth ary apetrakao amin'ny finday ity rindranasa ity, efa afaka ampifanarahina ireo fitaovana roa miaraka amin'ny ara-dalàna tanteraka. Raha te-hisintona ny fampiharana Huawei Health (Huawei Health) ianao dia azonao atao amin'ity rohy ity:
Ny fampisehoana famantaranandro dia iray amin'ireo tanjany. Amin'ity indray mitoraka ity dia mampiasa efijery AMOLED 1,39-inch ny marika sinoa. Izy ity dia efijery manara-penitra, izay manome antsika ny fifanoheran-kevitra avo kokoa sy ny loko tsara kokoa noho ny an'ny taranaka voalohany amin'ity famantaranandro ity avy amin'ny marika sinoa. Izy io dia efijery izay ho azontsika atao vakio tsara na dia ny masoandro aza dia manome anao mivantana, izay zava-dehibe, ankoatry ny mahazo aina. Mety noho izany raha ampiasaina any ivelany sy any an-trano.
Mikasika ny interface, ny Huawei Watch GT 2 dia mamela antsika hanana interface tsara tena mora ampiasaina. Raha atotaly dia misy sehatra 13 samihafa azontsika ampiasaina ao, miaraka amin'ny karazany maro amin'ity lafiny ity, ho an'ny fampiasana manokana ny famantaranandro amin'ny fotoana rehetra. Raha te hanova ny sehatra ianao dia tsindrio fotsiny ny efijery mandritra ny segondra vitsy dia hiseho ny lisitr'izy ireo feno. Mila mihodina fotsiny isika mandra-pahita ilay tiana hampiasaina amin'ny fiambenana. Tsindrio avy eo ary hoy izahay hoe haseho amin'ny famataran'ora ny dial.
Raha ny fampiasana ny famantaranandro dia tena ahazoana aina. Azontsika atao ny miditra amin'ny lahasa isan-karazany amin'ny Huawei Watch GT 2 amin'ny alàlan'ny fikosehana etsy sy eroa, noho izany dia mora ampiasaina izy io. Raha afaka miditra amin'ny menio feno isika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ambony. Ao no ahitantsika ireo safidy rehetra omen'ny famantaranandro antsika, mba hahafahantsika mitady ilay faritra tadiavintsika ary miditra azy. Tena tsiranoka tokoa ny afaka mifindra eo amin'ireo menus isan-karazany ary miasa amin'ny fiambenana. Ny safidy hitantsika eo amin'ny menio lehibe amin'ny fiambenana dia ny sasany toa ny fanatanjahan-tena, ny tahan'ny fo, ny kitay ho an'ny hetsika, ny torimaso, ny fihenjanana, ny fifandraisana, ny log Call, ny mozika, ny hafatra na ny fanairana, sns. Noho izany dia manana fiasa maro isika, izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
Raha atsofotsika ny efijery, toy ny rehefa manao an'io fihetsika io amin'ny telefaona isika, manana fidirana amin'ny fikirana haingana isika. Eto isika dia mahita safidy marobe, toy ny fiasan'ny efijery mandrakariva, aza manelingelina ny maody, ny fametrahana, ny fanairana na ny mahita ny findaiko. Fampiasana izay ampiasaina matetika ary izay fidirana amin'ny fomba haingana kokoa amin'ity tranga ity miaraka amin'ny fihetsika tsotra.
Ny Huawei Watch GT 2 dia natao mba hahafahantsika milalao fanatanjahan-tena. Noho izany, manana ny fahaizana mandray an-tsoratra hetsika miisa 15 hafa, ka ny fiasanay dia voarakitra amin'ny fotoana rehetra amin'ity famantaranandro ity. Ao anatin'ny sehatry ny fanatanjahan-tena ao amin'ny smartwatch dia ahitantsika ireo hetsika ampiasana azy, izay:
Raha manao ireo hetsika ireo isika dia hanoratra izay rehetra ataontsika ny famantaranandro (dingana, halavirana, fotoana, hafainganana). Ireo hetsika rehetra nataontsika dia voatahiry ao amin'ny fizarana firaketana fanatanjahan-tena, izay ahitantsika ireo angona rehetra momba azy ireo. Ka voafehinay ireo hetsika ireo raha sanatria ka te hahita azy ireo indray izahay. Ao amin'ny fampiharana Huawei Health dia azonao atao ny mahita azy rehetra ara-dalàna.
Fossil Sport Smartwatch, mpifanolo tena amin'ny Wear OS [ANALYSIS]
Ity famantaranandro ity dia manana ny asan'ny misy fandrefesana torimaso. Misaotra an'io fa ho hitantsika ny isan'ora natoriantsika, ankoatry ny fampisehoana fampahalalana momba ny dingana torimaso amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny fampiharana Huawei Health. Ka mifehy ny torimaso isika, miaraka amin'ny kalitaon'ny torimaso. Aseho koa ny tantara iray, mampitaha ny angona amin'ireo andro hafa, hahafahana mahita ny fivoarany amin'io lafiny io.
Ny Huawei Watch GT 2 dia mamela antsika hanara-maso ihany koa ny tahan'ny fo. Izy io dia hanome antsika hevitra henjana momba ny tahan'ny fo amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izay, manana fiasa izay hampahafantatra antsika izy raha 10 minitra ny fahita matetika dia avo loatra na ambany loatra. Izy io koa dia mety amin'ny fandrefesana ny fihenjanana, izay asa hafa ananantsika amin'ny fiambenana. Hanampy antsika handrefy ny haavon'ny adin-tsaina ananantsika izany.
Asa roa tena lehibe ao amin'ity Huawei Watch GT 2 ity, izay manavaka azy amin'ny famantaranandro hafa amin'ny ampahan'ny vidiny, dia ireo antso sy hafatra. Afaka mamaly na mandà antso azontsika amin'ny telefaona amin'ny fiambenana isika amin'ny fotoana rehetra. Raha azo atao izany, ny famantaranandro dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny telefaonintsika, ary ny elanelana misy eo amin'ireo fitaovana roa ireo dia tsy afaka mihoatra ny 150 metatra.
Amin'ny famantaranandro dia avela hanana fandaharam-potoana fifandraisana 10 izahay, mba hahafahantsika misafidy ireo olona izay ifandraisantsika bebe kokoa. Ny kalitaon'ny antso dia azo ekena kokoa, noho izany dia safidy tsara raha sendra vonjy maika na antso izay tsy ho ela loatra. Ho an'ny hafatra dia tsy mitovy izy io, azontsika atao ny mamaky azy ireo eo amin'ny efijery famantaranandro amin'ny fotoana rehetra tsy misy olana.
Tamin'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny Huawei Watch GT 2, nasongadina io fahafaha-manao io. Ny famataranandro dia hanome antsika fahafaha-mihaino mozika avy aminy, noho ny mpandahateny efa niasa. Ho fanampin'izay, miaraka amina tahiry ahafahantsika manana hira samihafa miisa 500 ao. Mety raha te-hihaino mozika isika rehefa manao fanatanjahan-tena amin'ny famantaranandro.
Raha te hanana ireo hira ireo isika dia tsy maintsy ampidinintsika amin'ny endrika MP3 izy ireo ary apetraho eo amin'ny famantaranandro izy ireo. Na dia azontsika atao aza ny manova ny fikirakirana ao aminy, mba hahafahantsika mihaino mozika avy amin'ny rindranasa toa ny Spotify avy amin'ny telefaona. Safidy azo antoka fa ahazoana aina kokoa ho an'ireo mpampiasa izany.
Efa tamin'ny famelabelarany no voalaza mazava. Ny Huawei Watch GT 2 dia hisongadina amin'ny fizakan-tenany, indrindra noho ny fampidirana processeur vaovao ao aminy, izay hanome antsika fahombiazana tsara kokoa, ankoatry ny fiainana bateria lava ao anatiny. Ity dia zavatra izay mihoatra ny fihaonana.
Ny marika dia nanambara fa ny androm-piainany dia mety hahatratra 14 andro tsy misy olana, na dia miankina amin'ny fampiasana azy aza izany. Ity dia zavatra azo hamarinina, satria afaka hitako fa na dia amin'ny fampiasana matetika be aza, manamboatra fanatanjahan-tena, mihaino mozika, fampandrenesana momba ny consulting, sns. Naharitra 11 andro teo ho eo aho nefa tsy nisy olana. Hatramin'ny fotoana nahazoako ny famantaranandro dia nampiasako azy isan'andro, ny sasany manan-kery bebe kokoa amin'ny hafa tsy dia kely, fa amin'ny fampiasana matetika.
Toy ny lojika, dia hiankina amin'ny fampiasana ny mpampiasa tsirairay avy amin'io lafiny io, indrindra raha mampiasa asa toy ny efijery foana isika, izay mampihena be ny fizakan-tenany. Ny fampiasana azy amin'ny antonony dia ahafahana manitatra ny fizakantenan'ity Huawei Watch GT 2 ity tsy misy olana hatramin'ny roa herinandro, noho izany dia lafiny iray tena lehibe izy io ary tsy isalasalana fa mahatonga ity famantaranandro ity avy amin'ny marika sinoa miavaka amin'ireo mpifaninana eny an-tsena.
Tsy nisy lainga, noho izany, fa mety haharitra tapa-bolana ny fizakan-tena. Raha mitady smartwatch ianao izay hanome anao fahaleovan-tena tsara amin'ny fotoana rehetra, ny Huawei Watch GT 2 dia aseho ho iray amin'ireo safidy feno indrindra amin'ity lafiny ity. Toy ny mahazatra, tonga miaraka amin'ny charger azy manokana ao anaty boaty ary ny tariby koa, mba hahafahantsika mampifandray azy amin'ny fotoana rehetra.
Ny Huawei Watch GT 2 dia aseho ho smartwatch feno indrindra. Volavola maoderina, marobe ary hazavana be, izay mahatonga ny fampiasana azy hahafinaritra amin'ny karazana toe-javatra rehetra, na rehefa manao fanatanjahan-tena na rehefa manao azy isan'andro. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fehikibo azo takalo dia azontsika atao ny mampifanaraka ny fampiasana azy amin'ireo toe-javatra ireo amin'ny fomba tena tsotra.
Io dia hahafahantsika mampiasa azy io rehefa mila manao fanatanjahan-tena isika, afaka mamantatra tsara ny asantsika. Ho fanampin'ny fananana fiasa fanampiny izay mahaliana azy toy ny antso, mozika na fifehezana torimaso. Ka tena mandeha tsara amin'io lafiny io. Tsy afaka manadino ny bateria goavambe sy fahaleovan-tena lehibe izay manome antsika ity famataranandro ity, hatramin'ny roa herinandro. Mahatonga azy ho maodely tena mahaliana.
Tsy misy isalasalana, amin'ny vidiny 239 euro fotsiny, ny Huawei Watch GT 2 dia aseho ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny sehatry ny famantaranandro marani-tsaina ankehitriny. Manaraka izay tadiavin'ny mpampiasa amin'ity lafiny ity amin'ny haavon'ny asa, ny famolavolana ary manana vidiny mora azo amin'ny ankamaroany. Fividianana izay tsy hanenenanao.
Tsy misy vokatra.Vidio Huawei Watch GT 2 ″ /]
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Fanadihadiana Huawei Watch GT 2: Ny smartwatch misy fizakantena bebe kokoa
Huawei Nova 5T: ny vidiny, ny tsipiriany ary ny fisian'ny terminal Huawei vaovao